- रश्मी रैखोला print
६ फुटे बाकस आयो
आमा त् रुदै गईन अरे!
आफ्ना लागि कम भो भनेर हो कि
नरूनु है आमा , नाना मात्र म लगाऊछु
पापा त् खाउला नि बाडीचुढी !
काकाले मलाई सुमसुम्यौउँदै
काखमै राखे बाटोभरी
सधै सपनीमा बा आउँछन्
गाडीमा पनि निदाए, आउँलान् कि भनि
आज सपनीमा पनि बाकस मात्र देखेँ
आफैलाई कोसे , कस्तो लोभी भए म पनि !
ट्याक्सीमा पहिलोचोटी चढ़दैछु
सिधै छिर्‍यो एयरपोर्ट भित्र
आमा अझै रूदै रहिछिन्
आफ्नो छाती पिटीपिटी !!
अलि नजिक गएर हेरेँ
बा पो रहेछन् बाकस भित्र!
आमाको मुख थुने दुई वटै हातले
निदाई रा 'छन् बा भनि !
बा सँगै तीन वटा बाकस बन्द थिए
खुशी भए!! बा पनि आएछन्
ल्याएछन् बाकस अरु पनि ‍!
धुप अगरबत्ती , अबिर अनि खादा
आउँदा किन निदाएछन् बा
उठेरै गा' थे जादा!
बा लाई पशुपति लग्नुपर्छ भन्दा
अचम्ममा परेँ ,सुतिरहेको मान्छे
कसरी गर्छ र दर्शन भनि!
मन्दिर पुग्दा त उठ्लान् बा
कस्तो लाटी म पनि!
शुक्रबार, चैत्र १८, २०७३ १७:३९:५०